Throbbing ubuhlungu ekhanda
Mhlawumbe, kunzima ukuhlangabezana nomuntu okwenye ujwayelene ikhanda. Odokotela bathi ubuhlungu bekhanda gqwa ahlupheke 70% labantu emhlabeni. It kunezimbangela eziningi futhi zenzeka ngisho abantu ephelele. Kodwa uma ubuhlungu zenzeka njalo, kufanele ubone udokotela ukunquma nezimbangela zabo bese uqalisa ukwelashwa uma kunesidingo.
Throbbing ikhanda ngokuvamile uphawu migraine. Lesi isifo evame kakhulu nge izimbangela simbe. Ngokwezibalo, iningi lamantombazana ayo wadalula ekuseni emva uvuka. Ubuhlungu kulesi simo kungaba ibelula futhi babulawa. Sinzima throbbing ikhanda, migraine kungase kuhambisane isicanucanu, ukuhlanza, ukungathandi izibani futhi umsindo elikhulu. Bekhanda kungathatha izinsuku ezintathu, kodwa kaningi khona-ke aluphumeleli amahora ambalwa. Kancane kancane, ubuhlungu throbbing ekhanda sinciphile kuletha isimo ukucobeka ezithandekayo ukozela. Uphenyo lukhombisa ukuthi abantu othambekele migraines, endaweni overactive empandni ingqondo. Kuyinto kulezi zindawo kuthinta hormone zomzimba womuntu. Nalokhu futhi yokuthi oluhlobene migraine kuthinta ikakhulukazi abesifazane. Kodwa iyehla iyenyuka hormone kukhona imbangela eyodwa kuphela kungenzeka migraine. Throbbing ikhanda migraine kungenzeka emva ukucindezeleka, ukuzikhandla ngokomzimba esindayo, ukusebenzisa kabi utshwala lapho waveza ukuthi ababhemayo noma abantu ukuphuza imithi. Isikhathi esining impela, a migraine luthathwe.
Ukuze uvimbele wayehlushwa ikhanda, kudingeka baqonde izimbangela zalo. Uma ucacise, okuyindawo nivuna sokuwa kuyoba lula ukugwema. Futhi uma yayisivele throbbing khona ubuhlungu ekhanda, kufanele sizame ukuyisusa esebenzisa amaphilisi, ezifana "paracetamol", "ukuphuza ama-aspirin" noma izidakamizwa ne-ibuprofen. Kulokhu, into eyinhloko ukuba overdo it ngokuthatha imithi imali emikhulu, njengoba ungakwazi kalula ukulimaza umzimba. Imithi yendabuko inikeza izindlela eziningi ukubhekana migraine, omunye wabo - ukwehlisa ikhanda emanzini ashisayo imizuzu embalwa. Ngomqondo onabile, amakhambi migraine ikhanda ngesikhathi wonke umuntu. Ngezinye izikhathi kuyasiza ngisho inkomishi yekhofi njalo noma ukukhonza ice cream. Into esemqoka akukona ukuthi ahlupheke ikhanda, ngoba kuletha kabi ngokuphazamiseka.
Ngaphezu kwalokho migraine, throbbing ikhanda engaveza e ezibangelwa amagciwane kanye imikhuhlane. inhlamvu sinusitis zayo, sinusitis, meningitis. Ngakho-ke, uma ungakaze waba migraine futhi ngesikhathi esifanayo kukhona ikhanda acute enomkhuhlane, kufanele ngokushesha kudokotela. Lapho ukwanda wegazi futhi wazizwa ejabhile imivimbo ikhanda. Kulokhu, ukusiza amathuluzi, ekunciphiseni ingcindezi. Ngaphezu kwalokho, ubuhlungu ezenzeka ngezikhathi kubangele kungenzeka izibuko ayilungile uma emsipheni optic ungaphakathi ukungezwani njalo. Ukwandiswa ingcindezi intraocular, izifo ezehlukene iso futhi kuholele ungakhululekile jerks ubuhlungu ikhanda.
Ukwelashwa nokuvikelwa ikhanda acute, okwenzeka izifo ezihlukahlukene, is ukususa lesi sifo. Ngakho-ke, ikakhulukazi uma njalo throbbing ikhanda, kudzinga kuhlolwa ochwepheshe bezokwelapha eziningana. Lokhu dokotela, ophthalmologist, owelapha, futhi ngezinye izikhathi kungase kudingeke usizo udokotela ohlinza izinzwa noma isifo esithathelwanayo. Ngokuvamile ukuhlaziywa ngempela jikelele igazi, ukuhlaziywa ushukela kanye nephrofayili lipid ukuze ukuxilonga imbangela wezakhiwo. Ngokuvumelana nesinqumo likadokotela angaqokwa
ukuhlolisisa egcwele, esimweni ngasinye kuba umuntu.
Kungani igazi egijima ukusuka ekhaleni layo beshaya ekhaleni noma umkhuhlane?
Steatosis isibindi: amakhambi ukwelashwa Folk (izilinganiso)
Ubuhlungu esiswini: Izimbangela
Kuthiwani uma isisu esibuhlungu phakathi nenkathi yokukhulelwa?
Izintwala: Izintwala yokwelapha by izindlela ezahlukene
Dream Ukuhunyushwa: dream ngalokho lomshado zabanye abantu
Inkulumo - kuyinto injini yokuthengisa
Ubuso Ukulungiswa: Yandisa cheekbone
Hlunga cherry Zhukovsky: incazelo izici
Uhudo kuyinto ingane: izimpawu, ukwelashwa kanye nokuvimbela isifo
Abalingisi izici "cool esikoleni" futhi i-movie
Maria Guleghina - "Cinderella Russian"
Izimpawu kanye nokwelashwa serotonin syndrome
Hernia enkabeni e abadala: eyohlinzwa ukubuyekezwa, Izimpawu kanye Ukwelashwa
Dysfunction we TMJ: Izimpawu kanye Ukwelashwa
Ukufakwa PVC skirting amabhodi ngezandla zabo